Antananarivo sy ny fianana andavanandro – Imahaka
imahaka	dans Uncategorized	 avril 3, 2014 avril 3, 2014 404 Words
Volana Janoary, saika mihisatra avokoa ny seha-pihariana rehetra, mitaraina noho ny hoe haratsin’ny tsena vita fety ny mpivarotra maro, tsy tahaka izany kosa ny zava-misy etsy amin’ny courts kely 67ha. Tsena handraisana an’ireo fanaka efa avy nampiasaina. Matetika, ady mivady, te hisolo zava-baovao fifindrana toeram-piasana, fa indrindra fivarotam-panana noho ny fahasahiranana no mahatonga ny entana eny.
Courts kely, izay no ahafantaran’ny be sy ny maro ity toerana eto ami’ny 67 ha ity. Herinandro mahery aty aorian’ny fetin’ny faran’ny taona, mitombo ny entana amidy eto amin’ity toerana manokana efa lasa mahazatra, ahitana entana samihafa efa avy nampiasana ity. 2 na 3 eo ho eo tato antin’ny 4 andro ny olon-tsotra tonga manantona mpivarotra iray, ety milaza fa manana entana amidy. Maro ny tokatrano no mivarotra fanaka sy ireo entana madinidinika ao an-trano noho ny fahasahiranana. Sarotra ho an’ny olona ny mindram-bola amin’ny havana na namana na koa amin’ny mpampanjana-bola, hany ka ny fanaka ao an-tokatrano no raisina. Efa maro ihany koa no mahafantatra fa be entana mahaliana ety rehefa fotoana toy izao.Raha mihisatra ny tsena ho an’ny mpivarotra hafa, mandeha kosa ny tsena ety amin’izao fotoana izao.
Ankoatra ny tsy fisiana, dia antony maro samihafa an-karatsiana na ankatsarana, no ahatongavan’ny entana ety amin’ny courts kely. Fitaovana efa niasa saingy mbola tsara no amidy eto. Mandeha ihany koa anefa etsy ankilan’izay ny resa-be fa hoe ety no fivarotana an’ireo entana halatra natsy dia mazava loatra. Na dia tsy karazana varotra voasokajy, izany hoe ara-dalàna aza ny ataon’izy ireo eto, miezaka ny manara-dalàna ireo mpivarotra raha ny fanazavan’izy ireo.
Tafiditra matetika amin’ny raharaham-barotra atao eto amin’ny 67 ha eto araka izany ny fokotany izay itoeran’ny tompon’ny entana iray amidy. ny fifampivarotana misy ifandraisan amin’ny resaka antoka ihany anefa no tena raisin’ny fokotany an-tanana raha ny fanzavan’ny tomponandraikitra iray.
Efa nahitana olana ny entana amidy ety amin’ity toerana ity, raha ny fanazavana nomen’ny polisin’ny boriboritany misahana an’ity faritra iny. Ny tomponandraikitry ny filkaminam-bahoaka izay manentanahatrany ireo mpivarotra mba tsy handray raha tsy entana mazava sy madio tsara ara-taratasy.
Sarotra ny fiainana eh
Tsy eto Antananarivo renivohtira ihany no handraisan’izy ireo ny fanaka amidy eto, fa hatrany Ivato, Ambohidratrimo sy ireo faritra hafa manodidina an’Antananrivo. Ny entan’ireo malagasy hifindra monina any ivelany ny ankamaron’ireo entana tsara eto, ao aihany koa ireo te hanavao ka mividy vaovao dia mivarotra ny teo aloha. fanaka avokoa ny 80%n’ny entana ety, ankoatra an’ireo fitaovan samihafa ao an-tokatrano.